“Soomaaliyeey Diida Gumeeysi Diida” “Diida Sunta Nuklearka”.
Waxaa maanta magaaladda Muqdisha ka socda mudaharadka looga soo horjeedo dowladda Talyaaniga oo ku xad gudubtay dhaqdhaqaaqa dib u heeshiisiinta, nabadda iyo Xeerka Soomaaliyeed.
Waxaan xusid mudin in mudahaaradkaas ay ka qayb qaateen Hooyooyinka Soomaaliyeed oo waaligoodba hiil iyo hoobo u hayay Nabadda ummadda Soomaaliyeed. Dhaqdhaqaaqa iyo Isbaadalka Mushtamaaca (social movement) ee waddan walba waxaa uu biloowda marka ay dumarku qaybtooda ka qaataan HALGANKA wadaankooda.
Ummadda Soomaaliyeed wa in ay xaasusta arrimaha soo socda oo ku saabsaan Dowladda Talyaaniga:
1. 1889 wixii ka dambeeyay Talyaanigu wuxuu ahaa gumeysi xasid ah oo falal ka baxsan bini aadnimada ka galay ummadda Soomaaliyeed. Halkaasna uu ku fuliyaay arrimahiisa dhaqaalo xaalufin ah oo uu qayraadka dhulkeena siiba beeraha ku yaala dhulka waabiyaadda maraan oo uu si sharci darro iyo xoog ugu beeran jiray muuska, qudaarta iyo qasabka.
2. Talyaanigu wuxuu taageeri jiray dowladdi Diktatorka aheyd (1969-1991) oo u macaawino militariga iyo dhaqaale ugu taageeri jiray.
3. Talyaanigu waxa muddo ka badan 20 sanno (1983-2005) uu mas’uul ka yahay SUNTA NUKLEARKA ee xeebaheena iyo dhulkeena lagu shubaay.
4. Talyaanigu wuxuu mas’uul ka ahaa dagaalkii dhex maray Janaral Caydiid iyo Cali Mahdi.
5. Talyaanigu wuxuu sanaadkii 1991 wadaanka soo galiyay dayaarad lacag ah oo uu halkaas ku kala burburiyay midnimaaddii ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantaasna uu ku kala qaybiyay madaxdii USC ee halgaanka xooreeynta ku riday dowladdii diktatorka aheyd.
6. Waqtigii UNOSOM iyo UNITAF (1991-1993) Talyaanigu wuxuu si sharci darro ah oo bareer ah uu istiicmaalay hubka niyuukleerka “DEPLETED URANIUM” (DU) siib goboladda Hiiraan (Jalalaqsi) iyo Banadir (Xamar). Suntaas nukleerka oo ah hubka ugu qatarsan oo militariga dowladaha reer galbeedka ku dagaal galaan. DU waxaa loo isticmaalay waddanka Soomaaliya
7. Askarti Talyaaniga ee UNOSOM waxay falaal xasuuq iyo kuwo kale oo ka baxsan xuquulqal insaanka (human rights abuse) ay u geesteen ummadda Soomaaliyeed .
8. Mudaadi dagaaladda sookeeye 1991-2005 Talyaanigu waxaa uu CUNAQABATEYN ku soo roogay Muuska laga dhoofiyo Soomaaliya oo loo dhoofin jiray wadamadda Galbeedka Europe. Taasi oo ummadda beeraleeyda ah ee Soomaaliyeed ku kaliftay baahi iyo dhimasho badan.
9. Talyaanigu wuxuu haatan ku lug leeyahay khilaafka u dheexeeya DFKMG oo laba garab u kala jabtay.
10. Talyaanigu wuxuu kale oo uu sanaadkaan gudaahiisa garabka Jowhar ugu deeqay hub iyo qalab faro badan oo militari ah, ujeedadiisuna waxay tahay in la soo cusbooneysiiyo dagaalo sookeeye oo hor leh. Qalaabkaas waxaa laga soo dajiyay Ceel Macaan iyo Cisileey. Arrintaan oo dhalisay iskhilaaf dhex mara dowladda Talyaaniga . Waxaana keenida hubkaan soo abaabulay danjire Mario Raffaelli oo ah waakilka dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya oo saldhigiisu yahay Nairobi.
11. Danjire Mario Raffaelli oo 3dii Disember 2005 wuxuu qudbaad ka jeediyay shir
12. ay mas’uulyin ka socota beesha calaamka ay Jowhar ku yeesheen wuxuuna yiri: “Dib u heeshisiin Soomaaliyeed way dhamaatay” – “Anaguna waan gaareynaa ujeedadeena” ayuu yiri danjire Mario. Mario Raffaelli marku leeyahay “Anaga” waxay muujineysa ujeedada siyaasadeed oo uu gumeeysi cusub Talyanigu (neo-colonialism) la damacsan yahay wadanka Soomaaliya. Raffaelli wuxuu kale oo uu ku xad gudbay baahida ay ummadda Soomaaliyeed u qabto dib u heeshisiin iyo nabad. http://www.geeskaafrika.com/igad2020_3dec05.htm
Ummadda Soomaaliyeed waa in ay xasuusataa dhibaatada caruurteena, degaankeena, qayraadkeena ka soo gaaray sunta nuklearka oo muddo 20 sanno ka badan Talyaanigu wadaankeena ku soo daad gureynayey. Waxaa maalin walba wadaankeena ku dhashaa caruur qabta cudurka kanserka, oo waxaa dhalata caruur gacmo iyo lugo la’aan ah iyo dad badan oo buurooyin waaweeyn oo middiba 15 kilo ka badan korkooda ka lulato.Inaa Lillaahi waa Inaa Ilaahi Raajucuun. Qawaaninta dunida u taal ee loo yaqaano “Basel Convention”qodobaadisa sida midka 8aad wuxuu ku saabsanyahay dib u celinta Sunta Nuklearka ah markii aysaan jirin heeshis dhexmara 2da waddan. Madaama ay suntaasi waddamadda dunida 3aad ay si sharci darro ah loo keeno, (Duty to re-import hazardous waste back to the country of origin) “Waa in sunta nuklearka dib loogugu celiyaa wadaanka laga soo dhoofiyay”.
Marka ay ummadda Soomaaliyeed heshiiso oo nabad iyo dowlad cadaalad ku dhisan la helo, waxaa ummadda Soomaaliyeed ku waajib ah in ay Dowladda Talyaaniga oo si sharci darro ah Sunta Nuklearka ugu duugtay wadankeena waa inTalyaaniga dacwad lagu soo oogaa oo la horkeenaa Maxkamadda Cadliga ee Adduunka. “International Court of Justice” si dib suntaas wadanka Talyaaniga dib loogu celiyo.
Waxyaabaha uu ka shaqeeynaayo Amb. Mario Raffaelli waxaa weeye in aysaan Soomaaliya ka dhalan dowlad karti leh oo u adeegta danaha ummadeeda.
Waa in ummadda Soomaaliyeed xasuusata in ay dowladda Talyaaniga waligeed u hayso ummadda Soomaalida cadowtinimo iyo midab takoor joogta ah. Waxaa kale oo jira in Soomaali badan oo daganeyd dhulka Talyaaniga oo tiradoodu ka badan tahay 350,000 oo qof ay ka soo haajiray wadaanka Talyaaniga oo nabadgelyo qaaxootinimo weydiisteen wadamadda kale ee Europe iyo Waqooyiga Amerika.
Dadkaan Soomaaliyeed oo ka sii haajiray wadanka Talyaaniga ayaa uu adkeeysan waayay dhaqan xumadda, sharci darada iyo midab takoorka ay kala kulmeen dowlada Talyaaniga. Soomaali badan ayaa sanad walba waqtiga barafka uu dhinta qaboow daradeed oo ku dhinta magaalooyinka waaweeyn ee ka tirsan dhulka Talyaaniga. Arrintaan damiir la’aanta ah ayaa ka baxsan sharciga dunida ee qaxooti u yaal iyo xuquuqal al insaanka.
Dowladda Talyaaniga ay wax talo ama taayo ah oo ay u haayso ummadda Soomaaliyeed ma jirto ee ha laga tashado. Addio Italia.
SOOMALIYA HA NOOLATO.
Amina Abdi Mohamud